people Nepal » उत्तर कोरियाले इन्टरनेटको सुविधा कहाँबाट पाउँछ ? उत्तर कोरियाले इन्टरनेटको सुविधा कहाँबाट पाउँछ ? – people Nepal
उत्तर कोरियाले इन्टरनेटको सुविधा कहाँबाट पाउँछ ?
Posted on October 6, 2017 October 6, 2017 by Purna Nanda Joshi
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको तर्फबाट आर्थिक प्रतिबन्ध झेलिरहेको उत्तर कोरियाले इन्टरनेट सेवा कहाँबाट पाउँछ ?
त्यहाँका मानिसहरु वा सरकार कसरी अन्य देशका भू–भागसँग आफूलाई कसरी जोड्ने गर्दछन् ? त्यो कुन देश हो जसले उत्तर कोरियालाई इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँछ ?
उत्तर कोरियाको खबरमा नजर राख्ने र यो देशलाई बुझ्न चाहनेहरुको मनमा यस्ता प्रश्न उब्जिने गर्दछन् ।
केही समय अघि एक खबर सार्वजनिक भएको थियो जसमा उत्तर कोरियाले रुसमार्फत इन्टरनेटको नयाँ कनेक्सन पाएको भनी दाबी गरिएको थियो । रुसको दूरसंचार कम्पनी ‘ट्रान्स टेलिकम’ ले उत्तर कोरियाका लागि यो सुविधा सुरु गरेको हो । साइबर सुरक्षा प्रदान गर्ने कम्पनी फायर आइले यसको जानकारी दिएको हो ।
फायर आइका अनुसार रुसी कम्पनीले आइबारदेखि उत्तर कोरियामा इन्टरनेट सेवा सुरु गरेको छ ।
अहिलेसम्म उत्तर कोरियामा चीनियाँ कम्पनी ‘चाइना यूनाइटेड नेटवर्क कम्युनिकेशन लिमिटेड’ एउटा मात्र यस्तो कम्पनी थियो जसले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
\_रुसको पकड बलियो हुनेः
रुसले उत्तर कोरियालाई इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएको खबर त्यतिबेला सार्वजनिक भएको हो जब वैश्विक ताकत परमाणु शक्तिसम्पन्न यो देशमा प्रतिबन्धमार्फत लगाम लगाउने कोसिस गरिँदै छ ।
फायर आइ कम्पनीका एशिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख प्राविधिक ब्रायस बोल्याण्डले भने, ‘रुसले उत्तर कोरियालाई इन्टरनेटको अतिरिक्त सुविधा पाएपछि उत्तर कोरिया प्राविधिक क्षेत्रमा थप बलियो हुनेछ र उसको अगाडि विभिन्न नयाँ विकल्प उपलब्ध हुनेछन् ।’
उनी भन्छन्, ‘यसमार्फत् रुसले उत्तर कोरियाको इन्टरनेट ट्राफिकमाथि नजर राख्न मद्दत पाउनेछ ।’
संयुक्त राष्ट्रले उत्तर कोरियामाथि तेल र कपडाको आयात–निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो तर यसमा इन्टरनेटको प्रतिबन्ध समावेश थिएन ।
\_वासिङ्टन पोष्टमा शनिबार एक रिपोर्ट प्रकाशित भएको थियो जसमा अमेरिकी साइबर कमानमार्फत उत्तर कोरियाको सैन्य गुप्तचर एजेन्सीलाई ह्याक गर्ने कोसिस गरिएको बताइएको छ ।
मार्टिन विलियम उत्तर कोरियाली प्रविधीका विशेषज्ञ हुन् । उनले ३८ नर्थ वेबसाइटमा उत्तर कोरियाले पाएको नयाँ इन्टरनेट कनेक्सनबारे लेखेका छन्, ‘अहिलेसम्म उत्तर कोरिया एउटा मात्र इन्टरनेट कनेक्सनमा निर्भर थियो । यो उसको लागि एक अनिश्चित स्थिती थियो । अर्को एक इन्टरनेट सेवा उपलब्ध भएपछि अब उक्त देशसम्म विकल्प पैदा भएको छ ।’
यसअघि सन् २०१४ मा सोनी पिक्चर्समाथि भएको साइबर अट्याकको ठूलो असर उत्तर कोरियामा भएको थियो । सोनी पिक्चर्सले उत्तर कोरियाली नेता किम जोंग उनको हत्याको षड्यन्त्रमा आधारित एक हाँस्यफिल्म ‘द इन्टरभ्यू’ बनाएको थियो जसबारे निकै विवाद पैदा भएको थियो ।
\_उत्तर कोरियामाथि प्रतिबन्धः
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले पछिल्लो महिना उत्तर कोरियामाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको थियो । चीन र रुसले पनि नयाँ प्रतिबन्धमा सहमती जनाएका थिए ।
उत्तर कोरियाले गत सेप्टेम्बर ३ तारिखमा छैटौं र आफ्नो सबैभन्दा ठूलो परमाणु परिक्षण गरेको थियो । यसै कारण सुरक्षा परिषद्ले नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
उत्तर कोरियाले परमाणु बम विकसित गरेको र यसलाई मिसाइलमा लोड गर्न सकिने दाबी गरेको छ र
नयाँ प्रतिबन्धमार्फत उत्तर कोरियाको आय स्रोत बन्द गर्ने कोसिस गरिएको छ ।
उत्तर कोरियाबाट कपडाको निर्यातमा रोकको स्विकारोक्ति दिइएको छ । यसका साथै उत्तर कोरिया तोकिएको सीमासम्म मात्र कच्चा तेलको आयात गर्न सक्नेछ ।